Dalalka Maraykanka iyo Ruushka ayaa u muuqda inay xal ka gaareen qaar ka mid waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ee arrimaha dalka Suuriya. Xukuumadda Moscow ayaa taageertay qorshe markii saddexaad lagu isku arkayo, iyada oo maalinta Jimcaha ah lagu kulmayo magaalada NY ee dalka Maraykanka, halkaas oo lagaga doodayo isbeddel dhinaca siyaasadda ah oo dalka Suuriya ka dhaca.
Dawladda Ruushka ayaa Talaadadii shaacisay inay taageersan tahay qorshahan, ka dib markii Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka John Kerry uu magaalada Moscow kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergei Lavrov.
Lavrov ayaa Isniintii sheegay in Ruushka iyo Maraykanku ay isku raaceen in la xoojiyo dadaalada lagaga hortagayo argagixisada, lagana wada shaqeeyo dhaqdhaqaaqyada military iyo la socodka ururada argagixisada ee dalka Suuriya.
Lavrov ayaa sheegay in ka dib wadahadalada New York ee Jimcaha ka dhacaya, ay kooxda taageerada Suuriya ee ISSG la rajeynayo inay soo gudbiso qabyo qoraal QM la horgeyanayo, kaas oo lagaga hadlayo isbeddel siyaasadeed oo Suuriya ka dhaca.